ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးမှာ လမ်းတလျောက်ကြိုဆိုသူများ
Breaking News , May 21, 2020
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးမှာ လမ်းတလျောက်ကြိုဆိုသူများကို တွေ.ရစဥ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီရဲ့ Stay Home ကာလ ကြက်နီသားဟင်း ကိုယ်တိုင်ချက်
သူပြောထားတာက ” လူဆိုတာခြေအနေနဲ့အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ ဥပမာ-ကျနော့်မိန်းမကဗော်လန်တီယာသွားချိန် ကျနော်ကမီးဖိုချောင်ဝင်ပြီးဟင်းချက်ထားတာမျိုး။ (မယုံမရှိနဲ့၊ကြက်နီမသားဟင်းနော်။)” တဲ့
တာမွေမှာ ဒီကနေ.မနက်အစောကြီး တိုက်ပြိုကျ
၂၁.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ မနက် ၂ နာရီ ၂၀အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာမွေမြို့နယ်၊ အမှတ်၅အေ၊ ဦးလွန်းလမ်းနှင့်အရိုးကုန်းလမ်းထောင့်၊ အရိုးကုန်းရပ်ကွက်တွင် တိုက်ပြိူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ တာမွေမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ် (၁)စီး၊ သူနာတင်ယာဉ်(၁)စီး သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၀၂ ၅၂)အချိန်တွင်ပြီးစီး...
Breaking News , May 20, 2020
တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးက ချုပ်မိန့်(ရမန်)၂ပတ်ပေးလိုက်ပြီး ဇွန်လ ၃ ရက်နေ.ကိုရုံးချိန်းပြန်လည် ချိန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအမှုကိစ္စနဲ.ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိက Yangon Nation ကိုအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်
တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးက ချုပ်မိန့်(ရမန်)၂ပတ်ပေးလိုက်ပြီး ဇွန်လ ၃ ရက်နေ.ကိုရုံးချိန်းပြန်လည် ချိန်းဆိုလိုက်ပါတယ်
သံဃာတော်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ ပုတ်ခတ်ရေးသားတာကြောင့် မိတ္ထီလာမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်
Breaking News , May 19, 2020
သံဃာတော်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ စော်ကားပုတ်ခတ်ရေးသားခဲ့မိတာကြောင့် ပြန်လည်ဝန်ချတောင်းပန်ပွဲတခု ဒီကနေ. ၁၉-၅-၂၀၂၀ နေ.မနက်က မိတ္ထီလာမြို.၊နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ နဂါးရုံကျောင်း တိုက် ရှိ မြို့နယ်သံဃာ့နာယက ဥက္ကဌ ဆရာတော်ရှေ့မှောက် မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို တောင်းပန်ဝန်ချပွဲပြုလုပ်စဉ်မှာ ပြည်သူလူထုက မကျေနပ်တာကြောင့် လူစုလူဝေးနဲ....
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များအား အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းတိုက်မှ စားသောက်ကုန်များထောက်ပံ
Breaking News , May 18, 2020
၁၇-၅-၂၀၂၀ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က တာမွေမြို့နယ် ပင်ရွှေ ညောင် လမ်းရှိ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်မှာမြန်မာ့ရုပ်ရှင်မှ လူကြမ်း သရုပ်ဆောင်များကို ဆရာတော်အရှင်ကုမာရ (ဦးဇင်းဘလူး)က ဦးဆောင်ပြီး စားသောက်ကုန်တွေထောက် ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုလူချောတို့အဖွဲ့ အယောက် (၈၀) အတွက်...